Hunhu hweVakaipa Ecommerce Vatengi | ECommerce nhau
ari vatengi vakaipa vanogona kuve dambudziko ye e-commerce zvitoro mupfungwa yemubatsiro wavo uye kubudirira kwavo. Vatengesi havangakwanise kugutsa mutengi wese uye mutengi wese, saka dzimwe nguva zvinokufadza kubvisa vatengi vakaipa veEcommerce.
1 Hunhu hwevatengi vakaipa veEcommerce
2 Vatengi vane zvisizvo zvinotarisirwa
3 Vatengi vekupokana kusavimbika
4 Kutyisidzira kupokana nebhizinesi
5 Vatengi vane mutauro wakashata
Hunhu hwevatengi vakaipa veEcommerce
Tevere tinoda kutaura newe nezve hunhu hukuru hweiyo vatengi vakaipa mue-commerce uye kuti mutengesi wese anofanira kuziva nezvazvo.
Vatengi vane zvisizvo zvinotarisirwa
Vamwe Vatengesi veEcommerce vane tarisiro dzisina musoro, kunyangwe kana zvese zvaitwa zvakanaka. Iko hakuna kana chinhu chingaitwe kuvafadza, iwo ndiwo mhando yevatengi vanoda zuva uye vanozotenda kuti iwe unogona kuvapa iro. Kana yako Ecommerce isiri kutaurirana nemazvo, chenjera mutengi akabatwa. Tarisa kuti ruzivo rwese, nzira yekutenga, yekudzorera mapurisa, kutumira, nezvimwe, zviri pachena sezvinobvira.
Vatengi vekupokana kusavimbika
Humwe hunhu hwe vakaipa ecommerce vatengi ndeyekuti ivo vanogona kuyedza kuwana chimwe chinhu pasina. Ndokunge, zano ravo ndere kubiridzira bhizinesi rako kuti uwane purofiti. Izvo zvavanowanzoita kuraira zvakachipa-zvigadzirwa uyezve wotora mari yako kudzoka kuti uwane zvinhu zvemahara.
Kutyisidzira kupokana nebhizinesi
ari vatengi vakaipa Ivo zvakare vanowanzo sarudza kutyisidzira kumhan'ara kana kumhan'arira bhizinesi rako kuboka revatengi kana kuita zvakashata kushambadzirwa pasocial media. Kunyangwe zvingave zvinoremedza mupfungwa, zvakanaka kuti mutengi iyeye azive kuti iwe uchazobvunzana nemagweta ako usati waenderera mberi nehurukuro.
Vatengi vane mutauro wakashata
Zviri pachena kuti hapana mutengi ane mvumo yekushungurudza kana kutuka kwete iwe semuridzi weEcommerce, ndoda vashandi vako. Vamwe vatengi vanogona kushandisa mazwi anonzwika zvakanyanya nekuda kwehasha dzavo, asi mumwe munhu anotuka kana kutuka haagone kutsungirira neimwe nzira. Hazvina kukodzera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Hunhu hwevatengesi vakaipa veEcommerce